याद गर्नुहाेस् ! यस्ता कारणहरूबाट हुन सक्छ ब्लड क्यान्सर, जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
याद गर्नुहाेस् ! यस्ता कारणहरूबाट हुन सक्छ ब्लड क्यान्सर, जान्नुहाेस्
Stock Art from Getty Images. Purchase January 7, 2013. For use in the Hematology flyer, project # 4731. Also for ITI, blog, and other design use, as necessary
क्यान्सरको कारणले नेपालमा दैनिक ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै क्यान्सरको कारण वर्षेनी लाखौँले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । क्यान्सर मानव शरीरमा जतिबेला पनि लाग्न सक्छ । तर क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भन्छन्, ‘समयमै क्यान्सरलाई चिन्न सके निको हुन्छ ।’
कोषिकाहरु सय, हजार, लाख हुँदै बढ्दै जाने तर नियन्त्रण भएन भने त्यसलाई क्यान्सर भनिन्छ । क्यान्सर कुनै भाइरस इन्फेक्सन र वंशाणुगत पनि हुन्छ । कोषिकाहरु बढेर एकबाट अर्को ठाउँमा फैलिर्दै जानुलाई क्यान्सर भनिन्छ ।
क्यान्सर शरीरको जुन पनि भागमा हुनसक्छ । कान, गाला, हड्डी, छाती, रगत, स्तन, पेट जस्ता शरीरका अंगमा क्यान्सर हुनसक्छ ।डब्लूबीसी अर्थात ह्वाइट ब्लड सेल्स बढ्दै गयो भने ब्लड क्यान्सर हुन्छ ।
त्यतिबेला क्यान्सरको उपचारमा पनि खासै विकास भएको थिएन । तर अहिले ब्लड क्यान्सरको उपचार नेपालमानै सम्भव भएको छ ।ब्लड क्यान्सरमा पनि क्रोनिक ब्लड क्यान्सर भएकालाई ट्याब्लेट खुवाइन्छ ।
एक्यूट ब्लड क्यान्सरलाई भने किमोथेरापी नै दिनुपर्ने हुन्छ । क्यान्सर मात्रै होइन कुनै पनि रोग सुरुमानै पत्ता लगाउँदा कम खर्चिलोका साथै उपचारमा पनि सहज हुन्छ । ढिलो भएर रोग फैलिसक्दा गाह्रो हुन्छ ।
जुन परिवारका सदस्यहरुमा क्यान्सर भएको छ त्यस्ता परिवारका व्यक्तिहरुले क्यान्सरको नियमित परीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ ।ब्लड क्यान्सर समयमानै पत्ता लगाउन नसक्दा गिजा, नाक, कानबाट पनि रगत बग्नसक्ने सम्भावना हुन्छ ।
नेपाली महिलाहरूमा भेटिने एउटा मुख्य क्यान्सर पाठेघरको क्यान्सर हो, जसको कारण ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस हो । बाँकी क्यान्सरका कारणहरूमा जंकफुड, विषाक्त पदार्थ हालिएका खानेकुरा, कीटनाशक छरेर उमारिएका तरकारी फलफूलको सेवन र वंशाणुगत कारणहरू तथा प्रदुषण हुन् । केही क्यान्सरहरूको कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
Don't Miss it के तपाइलाइ टाउको दुख्ने समस्या छ ? सधैँ यस्ता कुराहरूबाट टाढा रहनुहाेस्
Up Next गुणकारी ओखरको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउछ जान्नुहोस्
कसरी राख्ने गर्मी र झरीमा खाद्य पदार्थ सुरक्षित ? जानाैँ
त्यसै पनि अहिले गर्मीको मौसम । त्यसमाथी मनसुन सक्रिय भएको बेलामा पर्ने अविरल वर्षाले हाम्रो स्वास्थमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको…
यी खानाले बढाउछ सेतो रक्ताकोसिका जानिराखाैँ
रगतमा सेतो रक्तकोशिका हुने गर्छ जसलाई ल्युकोसाइट्स पनि भनिन्छ । यस्तो कोशिका मुख्यतया पाँच प्रकारका हुन्छन् । यो नियमित बन्ने…
फेसियल गर्दै हुनुन्छ ? सही ढंगले नगर्दा बिग्रेला अनुहार जान्नुहोस् कस्तो तरिकाले गर्ने फेसियल
हामीले फेसियल गर्ने त भन्दछौं, तर यस्तो फेसियल कस्तो हुन्छ, कति प्रकारका हुन्छन्, कस्तो छालामा गर्ने भन्ने जानकारी हुनुपर्छ ।…